SUNSET GOSSIP ကိုရောင်းခြင်း - ရာသီလေးမတိုင်မီဖြစ်ပျက်ခဲ့သောဒရာမာအားလုံး - သတင်း
ရာသီသုံး ရက်မှစ၍ Sunset Selling S မိန်းကလေးများနှင့်အတူပြိုဆင်းသွားသည်
Netflix ကအရောင်းအ ၀ ယ်ဟာရာသီလေးလေးငါးပွဲပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ပဲအတည်ပြုလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်တွေထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးကတည်းကအတင်းအဖျင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။
Oppenheim Group မှမိန်းကလေးများသည်ရိုက်ကူးရေးအကြားငြိမ်သက်နေသည်ဟုသင်အလေးအနက်မထားခဲ့ပါ။ မိတ်ဖက်အသစ်များ၊ မင်္ဂလာဆောင်များ၊ ကလေးငယ်များ၊ အရွယ်အစားများနှင့်ရန်ပွဲများကိုကြိုးစားပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့အားလုံးကိုရှိခဲ့ပါတယ်။
ဤတွင်သင်ရာသီလေးနှင့်ငါးမတိုင်မီသိထားရန်လိုအပ်သည့်အရောင်းရဆုံးနေဝင်ချိန်အတင်းအဖျင်းများကိုဖော်ပြထားသည်။ သိုင်းကြိုး, က bumpy စီးနင်းဖြစ်သွား!
Instagram မှတစ်ဆင့် @thechristinequinn
သိသာထင်ရှားတဲ့အချိန်ကာလအသစ်တွေဆီကို ဦး တည်သွားနေတဲ့အကြီးမားဆုံးသတင်းကတော့ခရစ်စတီးန်လင် (Christine Quinn) ဟာသူမရဲ့ပထမဆုံးခင်ပွန်းဖြစ်သူ Christian နဲ့အတူမျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတာပါ။ ပြီးခဲ့သည့်လကသူမ People Magazine သို့ပြောကြားခဲ့သည် ဖြေ - ငါတို့မိဘတွေဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပျော်ရွှင်စွာဝေမျှနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အိပ်မက်များကိုပြသရန်အခိုင်အမာယုံကြည်ပြီး 'ဒီနေ့အထိအမြဲတမ်းအဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဤသည်လှပသောကိုယ်ဝန်ထင်ရှားခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာကျွန်မတို့မိသားစုတစ်ခုတည်ထောင်ချင်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးကျွန်မရဲ့နေ့စဉ်တွေးတောဆင်ခြင်မှုတွေကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်လို့မြင်ခဲ့တယ်။ ငါတို့ရဲ့ပထမဆုံးကလေးကိုမျှော်လင့်လို့အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်။ ငါသည်ဤနောကျအခနျးအဘယျသို့အဘို့ဤမျှလောက်အဆင်သင့်ပါပဲနှင့် mom, ဖြစ်ဖို့မစောင့်နိုင်ပါ!
Sunset Season4Selling တွင်ကိုယ် ၀ န်သည်အဓိကဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။
သူမ၏ကိုယ်ဝန်သတင်းနောက်ကွယ်မှခရစ္စတင်းသည်သူမနှင့်အခြားအိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်သူအချို့အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုများရှိကြောင်းအလွန်ရှင်းလင်းစွာပြောကြားခဲ့သည်။ ခရစ္စတင်းသည်သူမ၏ဓာတ်ပုံကိုသူမကလေး၏ဖုများနှင့်မကြိုက်သည့်အတွက် Mary, Chrishell နှင့် Heather တို့အားဖော်ထုတ်နိုင်သည့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုတင်ခဲ့သည်။ ခရစ်ဘရောင်းအားဖြင့်သစ္စာစောင့်သိ (သူသည်ဤသံတူသီဆိုသကဲ့သို့ obvs, မတည်မငြိမ်), နောက်ခံကစားခဲ့သည်။
- Christine Quinn (@XtineQuinn) မတ်လ 6, 2021
မာရိကိုအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ Distractify ကိုပြောသည် သူမ, Amanza, Chrishell နှင့်ဟဲလ်တို့သည်သူမဆီသို့ဆွဲငင်အားများလာသည်ဟုပြောဆိုခြင်းသည်အမှန်ပင်နီးစပ်ကြောင်း၊ ရာသီသုံးရာသီကုန်ဆုံးချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်လာခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်သူမရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူမခရစ္စနှင့်အတူကောင်းသောအအသုံးအနှုန်းများအပေါ်မဖွင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူမ၏ကလေးက Instagram ကိုသတင်းမဖော်ပြလိုခြင်းကိုမကြိုက်သည့်အတွက်သူမအားခရစ်စမတ်သို့ဖုန်းခေါ်ပြီးသူမကိုဂုဏ်ပြုရန်ပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည်ခရစ္စတင်းကသူတို့ကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ထုတ်ဖေါ်ပြသမှုကိုသူနှင့်အခြားသူများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်းသူထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သူမကဆက်ပြောသည်မှာသူသုံးယောက်စလုံးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိတ်ဆို့ခံထားရသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ငါအချိန်ချရှိသည်မဟုတ်လျှင်ငါတကယ်အများကြီးအခြားလူများရဲ့ Instagram ကိုကြည့်ကြဘူး။ ငါအရမ်းအလုပ်များတယ်, ငါကငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တင်ရန်လုံလောက်သောခဲယဉ်းပါတယ်။ သူမသည်ဒုက္ခနှိုးဆော်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ငါသူမ၏ဇာတ်လမ်းကို 'မင်းရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုငါမကြိုက်ဘူး' သို့မကျရောက်ဘူး။ ကျနော်တို့ကသူ့ကိုမှပိတ်ဆို့ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလတွင်ခရစ်ရှဲလ်သွားသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားအားလုံးကိုပြည့်စေခဲ့သည် ရည်းစားအသစ်နှင့်အတူ Insta အရာရှိတ ဦး Keo Motsepe သည် The Stars နှင့်အတူကခုန်ခြင်း။ သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားမိသားစုများနှင့်တွေ့ဆုံနှင့်အတူတကွချစ်စရာရုပ်ပုံများတင်ပို့စ်များနှင့်အတူ, ကောင်းစွာသွားခဲ့ပါသည်ပုံရသည်, ဒါပေမယ့်သူကအားလုံးကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်ဖေဖော်ဝါရီလလာ။
အီးသတင်းအရ Keo နှင့်နီးစပ်သူတစ် ဦး ကသူနှင့် Chrishell တို့သည်သူတို့၏သီးခြားနည်းလမ်းများကိုသွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော်လည်းအတွင်းလူအများက၎င်းတို့သည်သူငယ်ချင်းဖြစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ Chrishell နှင့်ရင်းနှီးသောဒုတိယအရင်းအမြစ်တစ်ခုမှာဤအရာသည်ရှုပ်ထွေးသောပြိုကွဲခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သင့်တော်သောအချိန်နှင့်မှန်ကန်သောအချိန်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကနှစ် ဦး စလုံးဟာသူတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာ profile များမှအတူတကွဓာတ်ပုံအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ပါတယ်။
Selling Sunset ရာသီ (၃) ရာသီတွင်အကြီးမားဆုံးဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မှာထိတ်လန့်စရာဖြစ်ခဲ့သည် Chrishell နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်း Justin Hartley အကြားကွာရှင်းပြတ်စဲမှု ။ တတိယရာသီအတွက်လှောင်ပြောင်သရော်မှုတွင် Justin သည် Chrishell ထံမှကွာရှင်းမှုအတွက်တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စီးရီးများတွင်သူမကသူမစာသားမှတဆင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ကွာရှင်းအကြောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသူကဆက်ပြောသည်။
၎င်းကိုတင်သွင်းပြီးတစ်နှစ်အကြာတွင်၊ ကွာရှင်းမှုသည်အပြီးသတ်ခဲ့သည်။ People မဂ္ဂဇင်းအဆိုအရ , စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးဖေဖော်ဝါရီလ 8 ရက်နေ့တွင်တရားသူကြီးတစ် ဦး ကပယ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဇနီးမောင်နှံသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင် ၄ လတိတိတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူတို့လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်လက်ထပ်ပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာတော့ Justin ကဒီလက်ထပ်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။
သတင်းကြီး ရာသီသုံး ရက်မှစ၍ Oppenheim Group သည်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီးယခုအခါ Orange County တွင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ထားသည်။ Jason သည်ပွဲစားသစ်ကို ဦး ဆောင်ရန်လက်ရွေးသူ Heather ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ၎င်းသည်ပြပွဲတွင်တွေ့မြင်ရသည့် Sunset Boulevard ရုံး၏တောင်ဘက်တွင်ခန့်မှန်းခြေတစ်နာရီခန့်ရှိသည်။
ကာတွန်း app ကိုလူတိုင်း၏သုံးပြီး instagram ပေါ်
သူက“ ဟဲလ်ဟာဒီရုံးခန်းထဲကနေထွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကရုံးကိုစီမံခန့်ခွဲသွားမှာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်နေသောရုံးသည်အရူးဖြစ်၏။ ငါဆိုလို, ကရူးရဲ့ ဒါကြောင့်မျှော်လင့်ငါမကြာမီငှားရမ်းလက်မှတ်ထိုးပါလိမ့်မယ်။
ရုံးခန်းသစ်သည် Heport နှင့်စေ့စပ်ထားသည့် Newport Beach Beachရိယာတွင်ဖြစ်သည်။ မာရိ၏ခင်ပွန်း Romain ရုံးနေရာပြန်လည်မွမ်းမံအလုပ်လုပ်နေဟုဆိုသည်။
Beverly Hills ၏အချမ်းသာဆုံးအိမ်ရှင်မ whos
Heather's Instagram ကိုတစ်ချက်သာကြည့်ပြီးသူသည်မင်္ဂလာဆောင်အပြည့်အ ၀ လည်ပတ်နေသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ သူမနှင့်တီဗီကြယ်ပွင့် Tarek El Moussa သည်သူတို့၏တစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်လှေခရီးစဉ်တွင်မေးခွန်းမေးခဲ့ပြီးနောက်သူတို့ဟာ ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်လမှာသူတို့နဲ့စေ့စပ်ခဲ့တယ်လို့ကြေငြာခဲ့သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @heatherraeyoung
အခုဆိုရင်ဟဲလ်တာကသူတို့တင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအတူတူကြိုက်ခဲ့ပြီး ၀ တ်စုံတွေ ၀ ယ်ဖို့ဈေးဝယ်ထွက်နေ၏။ သူမက ၀ တ်စုံတွေကိုအတူတူကြည့်ရင်း Chrishell နဲ့ Mary နဲ့အတူသူမရဲ့ပုံကိုတင်ခဲ့သည်။
အေးဂျင့်သစ်များသည် Selling Sunset ရာသီ ၄ တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်
Sunset cast အဖွဲ့ဝင်များကိုရောင်းချခြင်းမရှိသော Oppenheim Group တွင်အခြားကိုယ်စားလှယ်များရှိနေသည်မှာလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ , မာရိ Fitzgerald ကဒီမကြာမီပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ကပြောသည်။ သူမက“ ငါတို့မှာအေးဂျင့်အသစ်တွေရှိတယ်။ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရှိတယ်။ ငါတို့ဟာထုတ်လုပ်မှုနဲ့ Netflix ကိုဆက်ပြောဖို့ကြိုးစားနေတာ၊ သူတို့ကငါတို့သူငယ်ချင်းကောင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ပြပွဲမှာအခြားမိန်းကလေးစုံတွဲတွေကိုလိုချင်နေတာကိုပြောတာပါ။ သူတို့ဟာ Oppenheim အုပ်စုအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်၊ သူတို့အရမ်းအောင်မြင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါမျက်နှာအသစ်တွေရှိတာကောင်းတယ်ထင်တယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်သူတို့ကိုရွေးချယ်မယ့်အရာကိုမသိရပါဘူး။
Davina နှင့် Brett တို့သည် Oppenheim အုပ်စုမှထွက်ခွာခဲ့သည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Davina ကသူသည်အဖွဲ့မှထွက်ခွာပြီး Beverly Hills ရှိပြိုင်ဘက် Douglas Elliman နှင့်ပူးပေါင်းနေသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ သူမသည်ပြောင်းရွှေ့မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်သက်သက်သာဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုပါတယ်နှင့်အလုပ်သစ်သူမကငြင်းဆန်လို့မရဘူးကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူနှင့်ဂျေဆန်အကြားမကောင်းသောသွေးမရှိကြောင်း၊ သူသည်သရုပ်ဆောင်ရာတွင်ဆက်လက်ပါဝင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့သေးမယ့်သူမ၏နောက်ကျောကိုမြင်လျှင်မည်မဟုတ်ပါ။
Brett Oppenheim လည်းအဖွဲ့မှထွက်ခွာခဲ့သည်။ ရာသီသုံးပြီးနောက် ဂျေဆန် Oppenheim အဆိုပါ Tab မှအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည် သူ၏အစ်ကိုကသူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လာမည့်ရာသီများ၌ကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါပြောမယ်၊ ငါတို့ကအရမ်းနီးကပ်တယ်၊ ငါတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စမှာပြသနာမရှိဘူး။
ထိုမျှမက, Davina အဆိုပါ $ 75million စာရင်းရောင်းဖို့စီမံခန့်ခွဲမပေးခဲ့ပါဘူး
သင်စဉ်းစားမိလျှင်ဒေါ်လာ ၇၅ မီလီယံဒေါ်လာစာရင်းဖြစ်သည် နေဆဲအဆိုပါ Oppenheim Group မှ website တွင် ။ သူမမထွက်ခွာမီမှာဒါဗင်နားမရောင်းခဲ့ဘူး။ အဆိုပါစျေးနှုန်းကိုဖြစ်စေအပေါ်ကျဆင်းသွားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ, ဒါကြောင့်သူမသိသာကကျော်သူမ၏သေနတ်များမှီဝဲ။ အမှန်တကယ်မေးခွန်းမှာမည်သူကယခုစောင့်ကြည့်မည်နည်း။
ထို့ကြောင့်ရာသီလေးပွဲနှင့်အရောင်းရဆုံးနေဝင်ချိန် ၅ ပွဲမတိုင်မီဒရာမာနှင့်အတင်းအဖျင်းများစွာရှိကြောင်းပြောခြင်းသည်အလွန်လုံခြုံသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးအခုရနိုင်မလား?
Selling Sunset ၏ရာသီ (၄) နှင့် (၅) ရက်ကိုထုတ်ပြန်မည့်နေ့ရက်ကိုမူမကြေညာရသေးပါ။ ပထမဆုံးသိဖို့နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် Netflix သတင်းများအတွက်၊ ကျဆုံးခြင်း၊ ဉာဏ်စမ်းပဟေesိနှင့်မှတ်စုများအတွက် Facebook ပေါ်မှာ Netflix ၏သန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်းလိုပဲ။
• အသစ်သော Netflix အဖြစ်မှန်ပြပွဲရှိလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းသို့မဟုတ်အပေါင်ခံခြင်းမှကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံပါ